Krakow ga -eme mmemme ọgbakọ ọgbakọ mba ụwa na ọgbakọ ọgbakọ nke 2022
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa ozi Poland » Krakow ga -eme mmemme ọgbakọ ọgbakọ mba ụwa na ọgbakọ ọgbakọ nke 2022
Akụkọ mkpakọrịta • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Nzukọ Mmekọrịta Akụkọ • nzukọ • News • ndị mmadụ • Akụkọ na -agbasa ozi Poland • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Nzukọ ọgbakọ ICCA nke 2022 ga -adabakwa na ncheta afọ iri nke ndị otu Kraków nọ na International Congress and Convention Association (ICCA).
61st ICCA Congress na 13-16 Nọvemba 2022, ga-akpọrọ ndị otu ya n'obodo dị na etiti Europe nke bụkwa ebe ọdịbendị, nka na sayensị mba ụwa dị.
Kraków, Poland bụ ebe inyocha ọtụtụ narị afọ nke akụkọ ihe mere eme n'akụkụ ihe ịchọ mma nke ọgbara ọhụrụ.
Kraków gosipụtara n'ụzọ doro anya ntinye aka na ụkpụrụ abụọ nke ICCA: ịrụkọ ọrụ ọnụ na ịnabata ihe ọhụrụ.
Nke 61 Nzukọ Mba Ndị Dị n'Otu na Mgbakọ (ICCA) Congress na 13-16 Nọvemba 2022, ga-akpọga ndị otu ya n'obodo nke dị na etiti Europe nke bụkwa etiti ọdịbendị, nka na sayensị. Kraków, Poland bụ ebe inyocha ọtụtụ narị afọ nke akụkọ ihe mere eme n'akụkụ ihe ịchọ mma nke ọgbara ọhụrụ. Kwa afọ obodo a na -enweta n'ụzọ dị mfe na -anabata ọtụtụ ihe omume ọdịnala na agụmakwụkwọ, yana nzukọ azụmahịa.
The 2022 ICC Congress ga -adaba na ncheta afọ 10 nke CracowNdị otu ya na International Congress and Convention Association (ICCA). Mmekọrịta abụwo isi ihe na -aga n'ihu na Kraków na -aga n'ihu na ihe ịga nke ọma n'ime afọ iri gara aga.
Dịka ọmụmaatụ, KRAKÓW NETWORK na -achịkọta ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mmadụ 400, na -anọchite anya ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụlọ ọrụ 200 ma nwee otu agụmakwụkwọ 5. Ka ọ dị ugbu a, Kraków Future Lab nwere ọrụ ịbute nzukọ na teknụzụ ihe omume ọhụrụ. A na -ewu netwọkụ mmekọrịta siri ike ọ bụghị naanị na mpaghara kamakwa mba, gụnyere ụlọ ọrụ mgbakọ Poland nke Poland Tourism Organisation, Ọfịs ọgbakọ mpaghara 16, ndị otu ụlọ ọrụ mba, njikọta ebe, na isonye na mmemme onye nnọchi anya Congress. Kraków bụkwa onye otu ahịa ahịa obodo ukwu Europe.
"Cracow gosipụtara n'ụzọ doro anya itinye aka na ụkpụrụ abụọ nke ICCA: ịrụkọ ọrụ ọnụ na ịnabata ihe ọhụrụ. Maka nke a, obodo ahụ bụ nhọrọ doro anya maka ọgbakọ ọgbakọ nke afọ na -abịa. Ndị nnọchi anya nzukọ ICCA nke 2022 nwere ike ịtụ anya ahụmịhe nzukọ enweghị nkebi nke na-agwakọta ebe mgbakọ klaasị ụwa na nzukọ ihe omume, "Onye isi ICCA Senthil Gopinath kwuru.
ICC Ndị nnọchite anya Congress ga -ezukọ na ICE Kraków Congress Center, ọkọlọtọ azụmahịa na omenala obodo ahụ. N'ịbụ nke dị mma na etiti ahụ, ọ kwadola ọtụtụ mmemme klaasị na ihe dị iche iche dịka nnọkọ nke iri anọ na otu nke UNESCO World Committee 41th World Congress nke OWHC na Mgbakọ Ego Eyes na-eme kwa afọ.
“Mgbakọ ICCA bụ otu n'ime ihe omume kachasị mkpa na ụlọ ọrụ nzukọ ụwa. Kwa afọ ọ na -akpọkọta ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu puku ndị ọkachamara kacha nwee ahụmịhe n'ịhazi nzukọ mba ụwa na ọgbakọ ọgbakọ: ebe, ebe egwuregwu, PCO na mkpakọrịta. Poland ga -anabata ya na nke mbụ, nke n'aka nke na -egosi ọnọdụ ụlọ ọrụ anyị dị ugbu a, ma bụrụkwa nke tozuru etozu, na n'aka nke ọzọ na -emepụta ohere dị ukwuu maka mmepe ya "na -ekwusi ike na Mayor nke Kraków Jacek Majchrowski.
“Ka ọnụego ịgba ọgwụ mgbochi na-aga n'ihu na-abawanye, ụwa anyị amalitekwa nwayọ nwayọ ọzọ, anyị nwere obi ụtọ ịhụ nlọghachi nke ihe omume mmadụ. Krakow na -enye ebe nzukọ nke ọtụtụ ndị otu ICCA nwere ike nweta, obi abụọ adịghịkwa na obodo ahụ ga -egosi ihe kacha mma ụlọ ọrụ anyị nwere inye maka nzukọ mkpakọrịta mba ụwa, "Gopinath kwuru.
October 20, 2021 na 13: 27
شات عراقنا شات صوتي شات ذهباش العراق دردشة عراقية